Ungafa Yini Nge-Asthma? - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Yokungezwani Nemizwa Yomoya
Ikhaya>Siyini Isifo Somoya?>Isifuba Somoya Esibucayi: Incazelo, Izimpawu kanye Nokwelapha>Ubungozi Obunzima Bokubulawa Isifo Somoya
Ubungozi Obunzima Bokubulawa Isifo SomoyaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-10T17:13:36+01:00
Uma une-asthma enamandla, noma othile osondelene nawe ekwenza, kungokwemvelo ukukhathazeka ngokuthi ungafa yini ngenxa yalesi simo.
Isifuba somoya (i-asthma), isimo esingapheli sempilo esithinta imigwaqo yomoya, sithinta nxazonke 235mn abantu emhlabeni wonke. Ingakhathaza abadala kanye nezingane futhi ikhule nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa-ke, bangaphansi kuka-10% abantu abathintekayo i-asthma enamandla.
Nge-asthma enamandla, izimpawu ziba zimbi kakhulu futhi zingahlala isikhathi eside kakhulu. Kuyinto engalindelekile, enzima ukuyilawula futhi kungaba nzima ukuyelapha, njengoba izimpawu zingaphenduli kahle njalo ekwelashweni okujwayelekile kwesifuba somoya. Ngakho-ke, i-asthma enamandla ingakhungathekisa kakhulu futhi ingaba nomthelela omkhulu ezimpilweni zabantu.
Ukufa kwesifuba somoya kuyenzeka, kepha kwezinye izimo kungagwenywa ngokuphathwa kahle kwezimpawu nokwenza izinqumo ngendlela enengqondo yokuphila.
Uma uhlaselwa yisifuba somoya kanzima, kungavimbela ukutholakala okwanele komoya-mpilo ekungeneni emaphashini akho futhi lokhu kungaholela ekuyekeni ukuphefumula. Isimo singakhula ngokushesha, ikakhulukazi ngaphandle kokungenelela kwezokwelapha ngokushesha, yingakho ukuhlaselwa yisifuba somoya kubhekwa njengesimo esiphuthumayo kwezokwelapha.
Mayelana nokuthi bangaki abantu ababulawa yisifuba somoya, izibalo zibonisa lokho mayelana abantu abathathu nsuku zonke uzobulawa yisifo somoya.
Ngokusho the Ukubuyekezwa Kazwelonke Kokufa Kwe-Asthma, Umbiko okhishwe yiRoyal College of Physicians, ukushona kwesifuba somoya e-UK kuphakathi kwamanani aphakeme kakhulu eYurophu. Baphenye ukufa kwabantu abangu-195 e-asthma okwenzeka ngonyaka owodwa bathola ukuthi ababili kwabathathu kulabo abashonile bebengavinjelwa. Phakathi kwezizathu zokubulawa kwabantu yi-asthma, amacala angama-65% athonywe yizici zesiguli ebezingagwemeka. Ngokwesibonelo:
abantu abaqhubeka nokubhema noma ukuvezwa intuthu kagwayi yize batholakala ukuthi banesifo somoya
abantu abangazange balandele izeluleko ze-asthma ezivela kodokotela babo
abantu abangaphumelelanga ukuhambela ukuqokwa kokubuyekezwa kwesifuba somoya.
Baphinde bathola ukuthi bangu-45% abashonile ngaphambi kokuthi bacele usizo lwezempilo noma ngaphambi kokuba banikezwe usizo oluphuthumayo. Cishe ikota yalabo ababulawa yisifuba somoya esibucayi babekade beya emnyangweni ophuthumayo wesibhedlela ngenxa yesifuba somoya okungenani kanye ngonyaka owedlule.
Olunye ucwaningo luthole ukuthi izici ezithile zingakhuphula ubungozi bokuhlaselwa yisifo somoya, okubandakanya:
Ubulili - abesifazane basemathubeni amaningi okubulawa yisifuba somoya kunabesilisa.
Ubudala - ucwaningo lukhombisa ukuthi ukushona kwesifuba somoya kuyanda lapho uthola abadala. Abantu abadala nabo basemathubeni amaningi okubulawa yisifuba somoya kunabantwana.
Izinhlanga noma izinhlanga - Abantu baseMelika base-Afrika kutholakale ukuthi kunamathuba aphindwe kabili kuya kathathu okufa ngenxa yesifo somoya.
Indawo - ukufa okuningi okuhlobene nesifuba somoya kwenzeka kulabo abathola imali ephansi noma ephansi amazwe. Izinhlaka zezenhlalo zezempilo (ukudla, izindlu, imfundo, imali engenayo, ukufinyelela ukunakekelwa, njll.) Zidlala indima ebalulekile emiphumeleni yesifuba somoya.
Ziyini izimpawu eziyisixwayiso?
Ukwazi izimpawu eziyisixwayiso zesifuba somoya nokuhlaselwa yisifo somoya kubalulekile, ukuze ukwazi ukuthatha isinyathelo ngokushesha.
Izimpawu ze i-asthma enamandla zihlanganisa:
Kwesinye isikhathi izimpawu zesifuba somoya ezinzima ziba zimbi noma zivame kakhulu ngaphambi kokuhlaselwa yisifuba somoya okukhulu. Isibonelo, ungathola ukuthi izimpawu zesifuba somoya ziphazamisa impilo yakho yansuku zonke noma imisebenzi ejwayelekile, noma kungenzeka ukuthi udinga ukusebenzisa i-inhaler yakho kaningi kunokujwayelekile. Ungathola nokuthi uphethwe yisifuba somoya ebusuku.
Uma wazi ukuthi izimpawu zakho ezijwayelekile ziyanda, khuluma nodokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya. Ukubuyekezwa kwemithi yakho kungasiza futhi ushintsho kuhulumeni lungasiza ekunqandeni ukuhlaselwa yisifuba somoya okwenzekayo.
Uma kwenzeka ukuhlaselwa yisifuba somoya okunzima, khona-ke izimpawu eziyisixwayiso ezibalulekile kuwe noma kwabanye abantu okufanele uzifune zifaka:
Ukuthuthukisa umbala ohlaza okwesibhakabhaka ebusweni, ezindebeni noma kuzinzipho
Ukuphefumula ngokweqile - akukwazi ukuhogela noma ukukhipha ngokuphelele
Ayikwazi ukukhuluma ngemisho ephelele
Akukho ukukhululeka ekusebenziseni i-reliever inhaler.
Uma lezi zimpawu zenzeka, iya esibhedlela noma ufune usizo oluphuthumayo ngokushesha. Ukuhlaselwa yisifuba somoya kuyisimo esiphuthumayo kwezokwelapha. Uma ungafuni ukwelashwa, impilo yakho ingaba sengcupheni.
Oxhumana nabo abaphuthumayo
Lapho udinga ukubiza usizo oluphuthumayo, njalo ngomzuzwana kuyabalwa. Ukwazi ukuthi iyiphi inombolo ongayishayela ukuze ubize usizo kubalulekile.
Uma uhambela phesheya futhi unesifo somoya, hlala ubhala kusengaphambili ukuthi iyiphi inombolo ongayishayela uma kwenzeka kuvela isimo esiphuthumayo sezempilo. Ukusiza, nanku umhlahlandlela owusizo wenkomba yezinombolo zokuxhumana eziphuthumayo emazweni ahlukahlukene:
E-UK, shayela u-999
E-US noma eCanada, shayela u-911
E-Australia, shayela u-000
Emazweni ase-European Union, shayela u-112
ENew Zealand, shayela u-111
Yisiphi isenzo okufanele usithathe uma wena noma umuntu onaye uhlaselwa yisifuba somoya?
Iningi leziguli zesifuba sizoba nohlelo lokusebenza lwe-asthma, oluchaza okufanele lwenziwe emcimbini onjalo. Kodwa-ke, uma ungajwayelene necebo labo, noma ukuhlaselwa yisifuba somoya kukudonsa noma kubazwise, kunezinyathelo eziningi ezingokoqobo ongazithatha ukusiza ukubhekana nalesi simo.
Shayela inombolo ephuthumayo yezokwelapha yezwe okulo, noma uthole omunye umuntu ukuthi akufonele, bese ucela i-ambulensi
Hlala uzolile ngangokunokwenzeka, njengoba ukucindezeleka kungenza i-asthma ibe yimbi kakhulu. Yiba nokuzola nokuqinisekisa uma ukunye nomuntu ohlaselwayo
Phefumula kancane futhi ujule, noma ukhuthaze umuntu onaye ukuthi enze kanjalo
Hlala ume endaweni ekahle futhi ukhulule noma yikuphi ukugqoka okuqinile - ukuncika phambili kancane kungasiza ukuphefumula ngesikhathi uhlaselwa yisifuba somoya, ngakho zama ukuhlala ngendlela engafanele esihlalweni uncike phambili emhlane wayo
Sebenzisa i-asthma reliever inhaler yakho (eluhlaza okwesibhakabhaka) ngenkathi ulinde usizo - uma kukhona isikhala esikunikezayo, sebenzisa lokho ukuhambisa umuthi, ngoba isipelesi sisiza ukukhukhumeza komuntu ohogelayo ukungena ezindleleni zomoya kahle
Hlala nalo muntu kuze kufike usizo bese uqhubeka nokumqapha. Uma bebonakala bozela noma bekhathele, kungasho ukuthi i-asthma yabo iya ngokuya iba yimbi.
Yazi ukuthi umoya obandayo ungenza izimpawu ze-asthma zibe zimbi kakhulu, ngakho-ke gwema ukuthatha umuntu ohlaselwa yisifuba somoya ngaphandle.
Ungathanda ukukhuluma nochwepheshe?
Noma ngabe usanda kutholakala une-asthma enamandla, ungathanda usizo olwengeziwe noma ufuna ukukhuluma nochwepheshe, bheka eyethu ikhasi lokuxhumana.
Funda okwethu okufundisayo umhlahlandlela we-asthma onzima ukuthola eminye imininingwane ngokuphila nokubhekana nesifuba somoya esibi.